Siyakuhalalisela ngosuku lozakwethu beMithi 2017: amahlaya, amahle, amahleki - izinkondlo kanye ne-prose & # 8213; Izithombe ezithokozisayo ngokuhalalisela ngosuku lweMithi kumuntu nodokotela wesifazane udokotela
Funny ukuhalalisela ngosuku lwezakwabo baseMithi 2017: izithombe ezihlekisayo nezinkondlo ezihlekisayo
Okumangalisayo, okunzima, okunomthwalo wemfanelo, okuthakazelisayo ... ungaqhubeka nokubhala uhlu lwezintambo, olufanelwe omunye wemisebenzi endala kakhulu kunazo zonke - udokotela. Kodwa-ke, uma umuntu embiza ngokuthi naye othandekayo, konke okushiwo ngenhla kuthatha incazelo ekhethekile. Odokotela abaningi, izimo eziphuthumayo, abasebenzi bezophuthumayo, abahlengikazi, ababelethisi, behalalisela ngosuku lweMithi 2017 NgoJuni, 18 umsebenzi wabo ube yindlela yokuphila. Akekho kulaba bantu abazibonakalisa ebaluleke ngaphezu kokusiza ingane egulayo, ukubeletha, umuntu osekhulile, ukulondoloza impilo ngokujulile kulabo abagulayo. Siyakuhalalisela odokotela nabasebenzi bezokwelapha abancane, abangane babo, ozakwabo nezihlobo abanike amakhadi ahlekisayo ngezithombe ezihlekisayo, bafunde izinkondlo ezihlekisayo, bakhulume amagama amahle ngohlelo lwe-prose. Ngokwezibalo, inani labasebenzi bezokwelapha liye landa ngonyaka odlule ngamadoda angaphezu kuka-1 100 amadoda nabesifazane, kwafinyelela abantu abayizigidi ezingu-1.3.
Ama-comic ahalalisela ozakwabo ngosuku lweMithi 2017
Njalo ngonyaka isonto lesithathu likaJune lenziwa ngokulungiselela iholidi lomsebenzi labantu abaqeqeshiwe kakhulu. NgeSonto, ngoJuni 18, 2017, usuku lweMithi lugujwa. Ngalolu suku ezibhedlela, polyclinics, sanatoriums, izikhungo zokuvuselela zizohlonipha bonke abasebenzi bezempilo. Ozakwethu bazoshintshana ngokuhalalisela ivesi, befisa abangane esitolo esihle nokuphila. Ukuhlonishwa kweholidi kulezikhungo eziningi zezokwelapha kuyoba amakhonsathi. Izivakashi zazo zizoba izisebenzi zezokwelapha ezibhedlela zeminyango kanye ne-polyclinics, izihlobo zabo neziguli.
Izibonelo zama-comic ukuhalalisela ozakwabo ngosuku lweMithi 2017 evesini
Naphezu kobunzima bomsebenzi wabo kanye nezindabuko zezigameko zeziguli okungenakuphikwa ukuthi odokotela nabahlengikazi bahlangana nabo, odokotela abazange baphume kabi. Ihlaya liyabasiza ukuba babhekane nokucindezeleka okungenakugwemeka futhi babheke isimo ngokuhlukile. Ngosuku lwezokwelapha ngo-2017, ngoJuni 18, abasebenzi bezempilo bazoshintshanisa amavesi amahlaya, banikeze amakhadi abalingana nabo, babanike izipho ezincane.
Ngosuku lweMithi - ishaja kanye nemizimba kadokotela, Ukuhamba ngokuziqhenya ngaphansi kwesiphambano esibomvu! Ngifisa ukuba uhlale ne-clown Ngomuso owanelisekile, ojabule futhi ophelile! Iziguli zakho zibavumela ukuba baphuluke, "Ngiyabonga kakhulu!" Bakutshela. Ozakwethu akuyeke ukumomotheka, Impumelelo nenhlanhla emnyango wokugodla!
Vumela umholo wakho ulula Futhi ungazizwa, Kodwa ngaphandle kwesifungo se-Hippocratic You ngeke ukwazi ukuhlala usuku! Ngokuba impilo usentabeni, Futhi uphonsa ukuhlupheka, Ungalindele ukuthula kwakho nemoto engenamsebenzi! Kodwa ngosuku lweMithi, okungenani Hamba emuva ebhizinisini kancane, Ungakhathazeki ube buthakathaka, Isikhathi sokuphumula!
Sihalalisele udokotela engikufunayo ebusweni bakho namuhla! Futhi ungangivumeli ngizibambe, ngizokutshela, ungayigxili iqiniso lonke: wena, odokotela, sonke sidinga, Hlala phansi, ungcono. Kufanele uphile kahle, Ukuze ube nomusa kuziguli. Ngifisa wena konke, Kuyinto enhle ukuphupha kanjalo, Ake uzuze owakho Futhi ngokumangalisayo uzophila!
Funny ukuhalalisela ngeholidi lobuchwepheshe Usuku lweMithi 2017 - Izinkondlo ezijabulisayo
Ngo-2017, i-Medic's Day iwela ngoJuni 18. Ebusuku emazindlini amaningi amasiko, emahholo ezinhlangano zezokwelapha, kukhona amakhonsathi anikezwe abamele abomsebenzi obuhle kakhulu - udokotela. Izisebenzi zezeMpilo ngokwazo zifunda izinkondlo ezihlekisayo ezivela esiteji, zikhuluma nabo ku-First Aid, izidakamizwa, abahlengikazi kanye nabahlengikazi, abasizi bezokwelapha nodokotela bezobuchwepheshe ezihlukahlukene. Ukuhalalisela okujabulisayo kunika abahlengikazi banamuhla isimo sengqondo esihle futhi sibabekelele kuphela.
Izibonelo zezinkondlo ezihlekisayo - Ukubonga ngokugcwele ngosuku lweMithi 2017
Ngeliholide labantu abazinikezele ekubambeni okubaluleke kunazo zonke - ukuvikelwa kwezempilo nokulondolozwa kwempilo yabanye, usuku lwezokwelapha ngo-2017, izinkulungwane zezisebenzi zezempilo zizobutha ezindlini zobukhosi namasiko amahholo kanye nemitholampilo ukuze bathole ukuhalalisela osebenza nabo kanye neziguli. Amacala okugubha azokwelulelwa nge-funny skits mayelana nodokotela, izinkondlo ezihlekisayo kanye nezingoma ngokuphila "kwabaphili" banamuhla.
Impilo Ejabulisayo, ingqondo yezempilo! Izifo zibavumele ngokungenakuphika Thatha izinyawo zabo ezandleni zabo - futhi kude, Ukuze bangabekezeleleki nawe! Vumela imali ibhalwe esikhwameni, i-Health ithi izinkondlo, Namuhla ubeka usuku lwakho, Ugula wonke umuntu oneseluleko, Bavumele bahambe ngezinyawo zabo, Bahambisane nezinyawo zabo, Hhayi ngezinti kanye nemikhonto, Ukwenza lokhu, basize, Gcina lesi sifo ekuguleni!
Ukuthola izifo, imithi, izindlela zokusebenzisa imithi, Futhi izixuku zeziguli zijika ... Yilokho - amajojo, futhi lokhu - amaphilisi amabili, Futhi ngalolu busuku udokotela wethu akayena owakhe. Ngakho-ke namuhla kuyasiza kuma-medicia ukuthi ahlaziye futhi akhohlwe ubunzima. Sifisela wena iziguli ezinomusa nezomusa, Futhi ukuthi kulula ukuziphatha!
Siyakuhalalisela ngosuku lwezokwelapha! Makuvumeleke ukuba uyenze ngentando futhi uphoqe Ukwelapha isiguli noma ngabe kunzima kangakanani! Makube nethemba elanele nokholo, Makube nokwanele uthando, ukufudumala, Ezinyaweni zibeke isiguli, Pricks ukhohlwa kanye amabhandeki! Ngiyazi ukuthi unesihe, Akungabazeki - Hippocrates Njengoba nje usebenza ngangijabule kabi futhi ngijabule!
Sihalalisela ngezithombe ezimnandi ngosuku lweMithi 2017
Abantu bebelokhu beyazisa umsebenzi odokotela, abahlengikazi, ababelethisi, izimo eziphuthumayo kanye nabanye abasebenzi bezokwelapha. Ukuze bahloniphe bonke abaphulukisi, emuva ngo-1980, i-USSR yazalwa isiko lokugubha iSonto lesithathu ngoJuni, uSuku lweMithi. Njengasezikhathini zasendulo, umsebenzi wedokotela uhlala usithandwa kakhulu. Ngo-June 18, 2017, izihlobo, abangane kanye nozakwabo bezisebenzi zezokwelapha bazozihambisa ngamakhadi okubingelelana kanye nezithombe ezihlekisayo ezibonisa izigcawu ezivela empilweni odokotela.
Izibonelo zokuhalalisela abasebenzi bezokwelapha - Amakhadikhadi anezithombe ezihlekisayo
Udokotela ngumuntu obhekana nokubhekana nokuhlupheka kwabantu, amacala agugu okugula, ukufa. Noma kunjalo, odokotela abanomqondo ohle kakhulu wokuhleka usulu futhi bayakwazi ukuhleka usulu ngesikhathi. Okokuqala, bazihlambalaza, baxoxisana ngamakhadi ngezithombe ezimnandi nezinkondlo ngosuku lweMithi.
Siyakuhalalisela ozakwabo ngosuku lwezokwelapha ngo-2017 ku-prose
Usuku Lwezokwelapha aluyona nje kuphela yamaholide ochwepheshe. Ngamunye wethu uhileleke kuyo: yi odokotela abahamba naye kulo lonke impilo yakhe. Ekuzalweni kwengane, umuntu wokuqala oyithatha ezandleni zakhe uyisibhedlela. Njengengane, udokotela wezingane ubukele ingane ikhule. Njengoba uneminyaka yobudala, umuntu ngamunye uthola isifo - sasizwa futhi ngabantu abembethe izingubo ezimhlophe ukubhekana nazo. Odokotela sithemba izimpilo zethu. Ngo-18 Juni, 2017 izisebenzi zezokwelapha zizothola izincwadi zokubonga, futhi ziphethe odokotela kanye nezinhloko zeminyango zihalalisele ozakwabo ngokubambisana. Odokotela abaningi, abahlengikazi, abasebenzi be-ambulensi bayothola imiklomelo nemiklomelo yemali.
Izibonelo zokuhalalisela ozakwabo ngosuku lwezokwelapha ngohlelo lwezokwelapha
Ngokwesiko, ngosuku lweMithi, bonke abasebenzi bezikhungo zezokwelapha bahlangene emahholo nasendlini yesiko ukuze babatshele amazwi okuhalalisela, bafisa ukuba baphumelele enkonzweni kanye nenjabulo elula emindenini yabo. Odokotela abakhulu kanye nabaphathi bezibhedlela kanye ne-polyclinics babongabonga ozakwabo ngenxa yomsebenzi wabo onzima nokuthembeka kulokho okukhethiwe.
Ngumlingani othandekayo, ngosuku lwe-Medical Worker, wamukele izifiso zami eziqotho zenjabulo, impumelelo nokuchuma. Vumela ungalokothi uphawule izinzuzo oziletha kubantu, vumela iziguli zakho zihlale zijabule futhi zikubonga. Siyakuhalalisela!
Mngane wami othandekayo, ngamukela ukuthokoza kwami ​​ngosuku lwe-Medical Worker. Ukuba udokotela ukubiza kwakho ngempela, usiza iziguli zakho ukuthi zilondoloze izinto ezingabalulekile kakhulu: impilo nempilo ende. Qinisekisa ukuthi abantu bayabonga ngaso sonke isikhathi futhi ubuso babo buyakhanya kakhulu ngezempilo nenjabulo. Gcina it up! Siyakuhalalisela!
Sonke sasisebenzisa ukwesaba odokotela kusukela ebuntwaneni. Kodwa, lapho sikhula, siyashesha odokotela ukuba bakhononde ngomkhuhlane wethu, ukuze basibhale ikhefu lokugula. Ngeholide lesisebenzi sezokwelapha kanye neziguli ezithokozile!
Sihalalisela ngobuqotho ngosuku lodokotela kudokotela wesifazane
Njalo ngonyaka, ukubeka usuku lweMithi, ukuphathwa kwezikhungo zezokwelapha kubhala into entsha evelele empilweni yemithi. Kuleliholidi, ukukhuluma ngobuchwepheshe obusha, imibono, ukuthuthukiswa, bathi ngaphandle kwabantu abazinikezele, phakathi kwabo kukhona odokotela abaningi besifazane abahle kakhulu, akukho okunye okungenhla okuyoke kubonakale. Sihalalisela ngobuqotho abahlengikazi, ababelethisi, odokotela kanye nosuku lwabo, bafisa impilo yabo, ukubekezela nokukhuthazela.
Izibonelo zokuthokoza ngobuqotho ngosuku lweholidi lodokotela udokotela wesifazane
Ngobusuku lweSuku lweMithi, abantu abanezandla zegolide - odokotela, ababelethisi, abahlengikazi - bazohlangana ezibhedlela eziningi nasepolyclinics, izindlu zokubeletha nezindlu zangasese, ngaphandle kwanoma yikuphi umphakathi ongenakwenzeka namuhla. Udokotela ukubiza. Njengoba ebizwa ngokuthi "isisebenzi sezokwelapha", abahlengikazi baqonda yonke imithwalo yemfanelo ebeka emahlombe abo. Namuhla eRussia iningi labaphili bangabesifazane. Ngemizamo yabo, amakhulu ezinkulungwane zeziguli asevele esindisa izimpilo; ngenxa yomsebenzi wabo ozinikezele, iziguli eziningi zibuya ngokuqondile "kwelinye izwe." Izigidi zezakhamuzi zaseRussia zavela ngosizo lwabo. Ngo-June 18 odokotela bazothola ukuhalalisela kakhulu nokufisa okuhle.
Awuyena umnikazi wama-yachts, ama-cottages, ama-dachas, Uyintombazane enombala engeyona encane ... Ungcono: ungudokotela waseRussia olula, Futhi awunokwethenjelwa noma kuyadingeka. Nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, usuku nosuku Awunalo usizo emhlabeni jikelele: Usika, usike, usiphulule Kuzo zonke izifo nezifo! Futhi kulokhu kuphila ijubane elikhazimulayo Ungakhathazeki ngomdanso noma indondo ... Udokotela wethu, sikubuza: ungaguli! Asibona odokotela futhi sizophulukisa kakhulu!
Umsebenzi wezokwelapha Angazi noma yikuphi abantu abangahleliwe. Ubutha umthwalo wemfanelo, othembekile futhi oqotho esifungweni sakhe. Gcina ukwethembeka kwakho emgwaqweni okhethiwe, Futhi makuzuze ukuhlakanipha namandla Ukuphila ngenjabulo, ngokuthula, ngaphandle kwe-alamu, Futhi ukuthi ukusebenza kwakho kuletha injabulo kuphela
Inkazimulo, udumo kunodokotela, izisebenzi zangasese, izimo eziphuthumayo, Bonke abahlengikazi, ama-oculists, izidakamizwa, izidakamizwa, ama-stomatologists kanye ne-ENTs, Sihlabelela inkazimulo ku-chorus. Ngisho noma umuntu ephilile, impilo yaqala nodokotela! Izandla zabo ezithandayo zaxoshwa emanzini kafulawa, Ukuze sikwazi ukuzalwa. UNkulunkulu angasivumeli ukuba sibambe umkhuhlane, Ukubamba ama-bronchitis il Influenza - Masikhumbule ngokushesha! Uzotshelwa ngabo bonke abantu, Yeka ubuchwephesha nesibindi; Indlela yokumboza ukunakwa, Ukuthuthukisa isimo; Njengoba silwela izimpilo zabantu, Khohlwa ngabanye. Bathatha isifungo sikaHippocrates; bathembekile kuye emsebenzini. Udumo, inkazimulo odokotela! Sikukhothamela phansi.
Ngiyakuhalalisela kakhulu ngosuku loDokotela waseMdokotela waseMrgy 2017
Ukunquma kwesinye isikhathi ukuba abe udokotela, amadoda amaningi, abaphulukisi besikhathi esizayo, bakhetha umsebenzi wokuhlinza udokotela ohlinzayo, oncologist, wamazinyo, wezifo zengqondo, isifo sezinzwa zegazi, i-otolaryngologist. Ngayinye yalezi zinto kanye nezinye izinto ezikhethekile zibaluleke kakhulu. Odokotela bezinambuzane kanye ne-oncologists basindisa izimpilo, izifo zengqondo zizinakekele impilo yengqondo yeziguli, ababelethisi - zizosiza ekuboneni isakhamuzi esincane saseRussia. Ngosuku lodokotela bonke odokotela balezi nezinye izinto ezikhethekile bayakwamukela ukuhalalisela amahle ngokuphathwa kwezikhungo zezokwelapha nezihlobo.
Izibonelo zokuthokoza okuhle ngosuku lweMithi 2017 yodokotela wesilisa
Ukuhalalisela odokotela-amadoda ngosuku lweMithi, izinhloko zezikhungo zezokwelapha, osebenza nabo odokotela, abangani babo nezihlobo zabo bafisa bona bona bangagula, bahlale bephephile, babe ngabantu abajabulayo nje. Bafuna iziguli ziphume ezibhedlela kanye ne-polyclinics enempilo, ngokumomotheka okukhanyisa ubuso babo obuhle. Ukubonga ngobuqotho kubo bonke abagulayo kuboniswa iziguli zabo. Izibonelo zamagama afanele nezifiso zingatholakala kuleli khasi.
Umsebenzi awunabo bonke emhlabeni. Futhi uhlale uhlonishwa yizingane Futhi abantu abadala ababephila ngokuphindaphindiwe, Abangakaze baphonswe enkingeni. Futhi labo abakwamukelayo noma inselelo yakho babonisa ama-vagary amaningi, iKilo ayethembi yonke imithi, ngaphakathi ngaphandle kokukwazi nokubona. Siyabonga ngokubekezela namandla akho, Ngenxa yokuthi umsebenzi ulethe okuhle, Ngokuba usinike isifungo sakho kanye, usindisa izimpilo zabantwana abahlukene.
Siyakuhalalisela ku-Aibolit, ophuza imithi, Yisiphi amaphilisi amaningi namaphilisi adliwe. Uyongilalela impulse Futhi alungise ukuma kwami, uBelly Ngizokhumbula ngombhede - Futhi ungiphendule ngaphandle. Kodwa ungangilindi, udokotela omuhle, ngizokhula kunoma yisiphi isimo sezulu. Futhi ngokuhlonishwa kweholidi lakho ngizokushiya ngaphandle komsebenzi!
Ukuthula ngaphandle kokwazi imini nobusuku, Ukuzwa umsindo wokuhlupheka kwabantu, Zama ukusiza wonke umuntu, Ngempela, ukuba udokotela ngumphefumulo obiza. Impilo kuwe iminyaka eminingi, Futhi amandla okusindisa izimpilo zabantu. Ngezinye izikhathi, ufana nomhubhe ekukhanyeni, Ithemba emphefumulweni, inhliziyo, imicabango. Ukunikeza ukuhalalisela ngosuku lweMithi 2017 osebenza nabo - abesifazane nabesilisa, odokotela bawafunda izinkondlo ezihlelekile, banike amakhadi ahlekisayo ngezithombe ezihlekisayo. Ngamunye walaba bantu udinga ukubekezela, umusa, iziguli ezibonga, amaholo ahloniphekile nezimo zokusebenza ezikhululekile.
Siyakuhalalisela ngoSuku lukaMama ngomamazala, indodakazi endala, umama wezingane. Amazwi afanelekayo okubingelela evesini nase-prose, izithombe, i-SMS emfushane
Umkhosi wokuvuna - izimo zezikole zasemqoka, abafundi abakhulu, abadala kanye nabaqashile. Imincintiswano ye-Autumn yomkhosi wokuvuna wendlu yamasiko emzaneni
Ngosuku lweNtsha ngo-2016. Imicimbi, imincintiswano, izinhlelo zeSuku Lobusha 2016 eRussia
Indlela yokwenza i-hairstyle yezemikhosi ilula: izindlela ezintathu ezilula!
Izandla zezingane zoNyaka Omusha
Yini ongayinika Ngomnyaka Omusha 2018: 5 imibono yesabelomali oyithandayo!
Iyini inombolo ka-Ivan Kupala egubha phakathi kwamaSlav. Siyakuhalalisela, amasiko, amasiko namasiko ebusika ku-Ivan Kupala
I-Thai fish broth
Uzoshada nomfokazi? Izincomo uma uhamba
Itholakale emisebenzini yasekhaya yokulahlekelwa isisindo esikhulu
Indlela yokuhlala nomakhelwane
Yini evimbela ingane ukuba ifunde kahle
Ukukhulelwa komfazi emva kweminyaka engamashumi amathathu
Izitayela zezinwele zamantombazane
Gwema "indlu-2": omunye ohlanganyela kulo mboniso wangempela watholakala efile
Umbala wamehlo nomlingiswa
Uthando lwamahhala ezweni lanamuhla
Indlela yokufeza izimbali zama-orchid ekhaya
Ungadliwa ama-raspberries ebusika - ngaphandle kokupheka, i-Pyatiminutka, imishaja, imishado. I-raspberry compote ne-liqueur ebusika
Ungabonisa kanjani intombazane ukuthi ufuna ukuba isoka lakhe?
Indlela yokugcoba kahle ubuso
Ungenza kanjani umamazala wakho angakhuphuki?
Kusho ukuphatha ama-calluses nama-corns ekhaya